Global Voices teny Malagasy » Espana : Ireo “Tezitra” Mpandàla ny 15M · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2012 6:21 GMT 1	 · Mpanoratra Lali Sandiumenge Nandika (en) i Elizabeth Rivera, nirinandrea
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny lahatsoratray manokana mikasika ny Krizy ao Eoropa .
Ny olon-drehetra ankoatran'i Karlos, izay niaina tao Mexico taona vitsy ary nanohana ny hetsiky ny Zapatista, dia tsy mbola nandray anjara taminà hetsika ara-tsosialy na ara-politika izany raha tsy tamin'io 15M io . Ary tsy nijanona intsony nanomboka ny 15 May 2011. I Mari Ángeles , mpikambana ao amin'ny vondrona El Prat manohitra ny fanapahan-jiro [ca] izay mitory ny fanapahan-kevitra hentitra noraisin'ny governemanta Catalan hanafoana ny fiahiana ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana; I Miguel Ángel dia ao anatin'ny Aturem Eurovegas  [ca] (Ajanony Eurovegas) hanao izay hanakanana an'ilay mpanefoefo Amerikana Sheldon Adelson hanova ilay renirano Llobregat delta ho toeram-pilokana lehibe sady raitra ary ahitana toerana fialamboly samihafa. Vao tsy ela akory izao i Josep Maria no nanao sonia ilay Iaioflautas , fikambanan'ireo mpiasa mpisotro ronono mahery manohitra ny Franco, Elatra havia, tolona sendikaly.
Rehefa tonga tao Catalunya Plaza, teo amin'ny faran'ny lalàmben'i Grace ilay diabe, dia nafanojo taminà andiany hafa avy any amin'ireo faritra hafa ao an-tanàna sy ny manodidina. Teo amin'io toerana io ry Desi sy Raquel, 33 sy 31 taona, no nametraka latabatra azo afindrafindra mba hanangonana sonia hanohanana ny Popular Legislation Initiative (ILP) avy amin'ny Plataform of Mortgage Victims (PAH)  [es] izay miady amin'ny fampanekena ny lalàna mifehy ny fandoavam-bola mitodika amin'ny tany aloha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/26/33384/
 El Prat manohitra ny fanapahan-jiro : http://acampadaprat.wordpress.com/
 Lorenz “curve” azy manokana : http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_curve